Estadio Municipal Vero Boquete de San Lázaro, antsoina hoe Estadio Multiusos de San Lázaro taloha, dia kianja misy tanjona marobe ao Santiago de Compostela, Espana. Ampiasaina amin'ny lalao baolina kitra matetika izy io ary io no tanin'ny SD Compostela. Manana fahaizana 16666 ary ny refin'ny pitch dia 105 amin'ny 68 metatra (344 ft × 223 ft).
Any amin'ny faritra atsinanana atsinanan'i San Lázaro, ny kianja dia kianja misy tanjona marobe, ampiasaina indrindra amin'ny lalao baolina kitra. Ny kianja dia miendrika boribory boribory ary manana tafo miloko terracotta izay miakatra amin'ny ilany andrefana mba hampidirana ireo talen'ny seza sy ny toerana fanaovan-gazety amin'ny ambaratonga faharoa. Ny pitch dia voahodidin'ny làlan'ny atletisma 400 m, izay fahita any amin'ny kianja Espaniola. Ny ankamaroan'ny seza 16 666 dia ampidirina amin'ny ambaratonga tokana sy rakotra.
Ny 24 jolay 1993 no nanatontosana ny lalao voalohany, raha nisy fifaninanana efatra narahina, izay ahitana an'i Deportivo de La Coruña, CD Tenerife, CA River Plate ary São Paulo FC. I Deportivo sy i River Plate dia nilalao tamin'ny lalao voalohany ary Bebeto dia nanana ny haja amboara ny tanjona voalohany.
Tamin'ny 8 Novambra 2018, nomena anarana ny kianja hanomezam-boninahitra an'i Vero Boquete, mpilalao baolina kitra Espaniola.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Estadio_Multiusos_de_San_Lázaro&oldid=1000512"
Dernière modification le 18 Janoary 2021, à 19:45
Voaova farany tamin'ny 18 Janoary 2021 amin'ny 19:45 ity pejy ity.